Sina Ahoana ny fomba famolavolana ireo faritra plastika Mpanamboatra sy mpamatsy | Mestech
To endrika plastika famolavolanadia ny mamaritra ny endrika, ny habe ary ny marimaritra iraisana amin'ireo ampahany, miankina amin'ny anjara asan'ny ampahany amin'ny vokatra, sy ny fitsipiky ny fizarana ho an'ny plastika. Ny vokatra farany dia ny sary ho an'ny famokarana bobongolo sy ny ampahany plastika.
Manomboka amin'ny famolavolana ny famokarana vokatra. Ny famolavolana ny faritra plastika dia mamaritra mivantana ny fahatsapana ny firafitra anatiny, ny vidiny ary ny fiasan'ny vokatra, ary koa mamaritra ny dingana manaraka amin'ny famokarana bobongolo, ny vidiny ary ny tsingerina, ary koa ny famolavolana ny tsindrona sy ny fizotran'ny asa-pahefana ary ny vidiny.
Ny faritra plastika dia be mpampiasa amin'ny vokatra, fotodrafitrasa ary ny fiainan'ny olona amin'ny fiarahamonina maoderina. Ny faritra plastika dia mitaky endrika sy fiasa samihafa. Mampiasa fitaovana plastika izy ireo ary miovaova ny fananany. Mandritra izany fotoana izany dia misy fomba maro hanamboarana faritra plastika amin'ny indostria. Ka asa kely ny famolavolana kojakoja plastika.
Ny famolavolana sy ny fitaovana samihafa dia novokarina tamin'ny fanodinana samihafa. Ny fanodinana plastika famolavolana dia misy eto ambany:
3. famolavolana tsindrona
4. famolavolana volavolan-tany
Misy fomba maro hamokarana azy ireo. Ny famolahana tsindrona dia fomba famokarana malaza, satria ny tsindrona miolaka 50% ~ 60% ampahany plastika dia novokarin'ny famolavolana byb injection, fahaiza-mamokatra haingam-pandeha io.
Asehoy ny boaty ho an'ny faritra plastika noforoninay:
Fefy plastika an'ny telefaona fahitana
Sombiny plastika amin'ny mekanisma
Trano plastika ho fitaovana
Ity ambany ity dia mizara antsipiriany momba ny famolavolana faritra plastika amin'ny lafiny telo izahay
* Torohevitra 10 momba ny faritra plastika famolavolana tokony ho fantatrao
1.Famariho ny endrika sy ny haben'ny vokatra.
Ity no dingana voalohany amin'ny fizotry ny famolavolana. Araka ny fikarohana eny an-tsena sy ny takian'ny mpanjifa, fantaro ny fisehoana sy ny fiasan'ny vokatra, ary mamolavola asa fampandrosoana ny vokatra.
Araka ny lahasa fampandrosoana, ny ekipa fampandrosoana dia manadihady ny azo atao amin'ny teknika sy teknolojia amin'ny vokatra ary manangana ny maodelin'ny endrika 3D an'ny vokatra. Avy eo, arakaraka ny fahatsapana ny asany sy ny fanangonana ny vokatra, kasaina hatao ny ampahany mety hitranga.
2.Saraho ny faritra tsirairay avy amin'ny sary ataon'ny vokatra, safidio ny karazana résin plastika amin'ny faritra plastika
Ity dingana ity dia ny manasaraka ireo ampahany amin'ireo maodely 3D azo tamin'ny dingana teo aloha ary manamboatra azy ireo ho toy ny tsirairay. Mifidiana ireo akora plastika na fitaovana enti-miasa vita amin'ny plastika mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ireo faritra. Ohatra, ABS dia matetika ampiasaina ao amin'ny
akorany, ABS / BC na PC dia takiana mba hanana toetra mekanika sasany, faritra mangarahara toa ny lampshade, poste jiro PMMA na PC, fitaovana na mitafy faritra POM na Nylon.
Aorian'ny fisafidianana ny akoran'ireo ampahany, azo atomboka ny famolavolana antsipiriany.
3. Farito ny zoro drafitra
Ny zoro volavolan-dalàna dia mamela ny fanesorana ny plastika amin'ny lasitra. Raha tsy misy ny zoro volavolan-dàlana, ny ampahany dia hanome fanoherana lehibe noho ny fikorontanana mandritra ny fanesorana. Ny zoro volavolan-dalàna dia tokony ho eo anatiny sy ivelan'ny ampahany. Arakaraka ny halalin'ilay ampahany no lehibe kokoa ny zoro volavolan-dalàna. Fitsipika tsotra momba ny ankihibe dia ny manana zoro drafitra 1 degre isaky ny santimetatra. Ny tsy fahampian'ny zoro drafitra dia mety hiteraka korontana amin'ny sisin'ny ampahany sy / na marika marika ejector lehibe (bebe kokoa amin'ity manaraka ity).
Drafitra zoro ivelany: ny halalin'ilay faritra dia lehibe kokoa ny zoro volavolan-dalàna. Fitsipika tsotra momba ny ankihibe dia ny manana zoro drafitra 1 degre isaky ny santimetatra. Ny tsy fahampian'ny zoro drafitra dia mety hiteraka korontana amin'ny sisin'ny ampahany sy / na marika marika ejector lehibe (bebe kokoa amin'ity manaraka ity).
Matetika, mba hananana endrika ivelany miseho tsara, dia vita amin'ny vatan'ny faritra ny firafitra. Masiaka ny rindrina misy endriny, lehibe ny fikorontanana, ary tsy mora ny manala azy amin'ny lavaka, ka mila zoro fanaovana sary lehibe kokoa. Ny firafitra coarser dia, ny zoro fandrafetana lehibe kokoa ilaina.
4.Hamarino ny hatevin'ny rindrina / hatevin'ny fanamiana
Ny famolavolana endrika mavesatra dia tsy faniriana amin'ny famolavolana tsindrona noho ireto antony manaraka ireto:
1) .Ny fotoana fampangatsiahana dia mifanaraka amin'ny hatevin'ny rindrina. Ny fotoana mangatsiaka lava ho an'ny solid dia handresy ny toekarena amin'ny famokarana betsaka. (mahantra mitondra hafanana)
2) .Ny faritra matevina dia mihena kokoa noho ny faritra manify, noho izany mampiditra fihenam-bidy misy fahasamihafana izay miteraka ady na marika milentika sns (toetra mampiavaka ny plastika sy ny toetran'ny pvT)
Noho izany isika dia manana fitsipika fototra amin'ny famolavolana ampahany plastika; araka izay azo atao ny hatevin'ny rindrina dia tokony hitovy na tsy tapaka amin'ny alàlan'ilay ampahany. Ny hatevin'ny rindrina dia antsoina hoe hatevin'ny rindrina kely.
Raha misy fizarana mivaingana ao amin'ilay ampahany dia tokony hatao poakaty izy amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fotony. Ity dia tokony hiantoka ny hatevin'ny rindrina fanamiana manodidina ny fotony.
3) .Inona ireo fiheverana momba ny fanapahana ny hatevin'ny rindrina?
Tsy maintsy matevina sy mafy ny asany. Ny hatevin'ny rindrina dia mety ho 0,5 ka hatramin'ny 5mm.
Tokony ho manify ihany koa izy mba hangatsiatsiaka haingana, vokatr'izany ny lanjan'ny ampahany ambany sy ny famokarana avo kokoa.
Izay miovaova amin'ny hatevin'ny rindrina dia tokony hotehirizina farafahakeliny azo atao.
Ny ampahany plastika misy hatevin'ny rindrina miovaova dia hiaina tahan'ny fihenan-tsasatra sy fihenam-bidy samihafa. Amin'ny tranga toy izany, ny fahazoana fandeferana akaiky dia lasa sarotra be ary impiry tsy afaka atao mihitsy. Raha ilaina ny fiovan'ny hatevin'ny rindrina, tokony hiadana ny fifindrana eo amin'izy roa.
5.Connection design eo anelanelan'ny ampahany
Matetika isika dia mila mampifandray akorandriaka roa miaraka. Mamorona efitrano mihidy eo anelanelan'izy ireo hametrahana ireo singa anatiny (fivoriambe na mekanisma PCB).
Ireo karazana fifandraisana mahazatra:
1). Snap hooks:
Ny fifandraisana hook hook dia matetika ampiasaina amin'ny vokatra kely sy salantsalany. Ny mampiavaka azy dia ny tadim-pandrika amin'ny ankapobeny dia apetraka amin'ny sisin'ny ampahany, ary ny haben'ny vokatra dia azo atao kely kokoa. Rehefa mivory izy dia mihidy mivantana tsy mampiasa fitaovana toy ny biriky, maty mihombo ny ultrasonic ary ny hafa. Ny fatiantoka dia ny tadivavarana izay mety hahasarotra ny bobongolo. Ilaina ny maodelin'ny slider ary ny mekanista amin'ny fampiakarana mba hahatsapany ny fifandraisan'ny farango ary hampiakarana ny vidin'ny bobongolo.
Ny tadin-koditra dia mafy orina ary azo itokisana. Manokana dia azo antoka sy mateza ny fametahana visy + voanjo, mamela disassemblies marobe tsy misy triatra. Ny fifandraisana amin'ny visy dia mety amin'ny vokatra misy hery fanidiana lehibe ary fanesorana maro. Ny fatiantoka dia ny tsanganana amin'ny visy.
3). Sefo miakatra:
Ny fifandraisana amin'ny bossing dia ny manamboatra ampahany roa amin'ny alàlan'ny fandrindrana henjana eo anelanelan'ny boss sy ny lavaka. Ity fomba fampifandraisana ity dia tsy dia matanjaka loatra ahafahan'ny vokatra misintona. Ny fatiantoka dia ny fihenan'ny hery mihidy rehefa mihabe ny fotoana fanesorana.
4). Welding welding
Ny fantsom-pandrefesana ultrasonic dia amin'ny alàlan'ny fametrahana ny ampahany roa ao anaty lasitra ultrasonika ary ny fampifangaroana ny faritra misy ny fifandraisana eo ambanin'ny asan'ny milina fantsom-pandrefesana. Ny haben'ny vokatra dia mety ho kely kokoa, ny lasitra fanindronana dia somary tsotra, ary ny fifandraisana dia mafy. Ny fatiantoka dia ny fampiasana bobongolo ultrasonic sy ny milina fantsom-pandrefesana ultrasonic, ny haben'ny vokatra dia mety tsy ho lehibe loatra. Aorian'ny fanapotehana azy dia tsy azo ampiasaina indray ireo faritra ultrasonic.
Ny undercuts dia zavatra manelingelina ny fanesorana ny antsasaky ny lasitra. Undercuts dia afaka miseho na aiza na aiza amin'ny endrika. Ireo dia tsy azo ekena ihany, raha tsy ratsy kokoa noho ny tsy fisian'ny zoro volavolan-dalàna eo amin'ilay lafiny. Na izany aza, ilaina ny undercuts sasany ary / na tsy azo ihodivirana. Amin'ireo tranga ireo, ilaina
ny undercuts dia vokarin'ny ampahany mihetsiketsika / mihetsika ao anaty lasitra.
Tadidio fa ny famoronana undercuts dia lafo kokoa rehefa mamokatra lasitra ary tokony hotehirizina farafahakeliny.
7. Tohano taolana / gussets
Ny taolan-tehezana amin'ny ampahany plastika dia manatsara ny fihenjanana (fifandraisana misy eo amin'ny enta-mavesatra sy ampahany) ny ampahany ary mampitombo ny fihenjanana. Izy io koa dia manatsara ny fahaizan'ny bobongolo satria manafaingana ny fikorianan'ny taolan-tehezana izy ireo.
Ny taolan-tehezana dia apetraka manaraka ny làlan'ny adin-tsaina ambony indrindra sy ny fiviliana eo amin'ny tsy fisehoan'ny faritra. Ny famenoana ny bobongolo, ny fihenan-tsika ary ny fandroahana ezine koa dia tokony hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fametrahana tadin-taolana.
Ny taolan-tehezana izay tsy tafiditra amin'ny rindrina mitsangana dia tsy tokony hifarana tampoka. Ny fifindrana tsikelikely amin'ny rindrina nominal dia tokony hampihena ny risika amin'ny fifantohan'ny fihenjanana.
Taolan-tehezana - refy
Ny taolan-tehezana dia tokony hanana refy manaraka.
Ny hatevin'ny taolan-tehezana dia tokony eo anelanelan'ny 0,5 ka hatramin'ny 0,6 heny ny hatevin'ny rindrin'ny anarana mba hisorohana ny marika milentika.
Ny haavon'ny taolan-tehezana dia tokony ho 2,5 ka hatramin'ny 3 heny ny hatevin'ny rindrina nom.
Ny taolan-tehezana dia tokony hanana zoro volavola 0,5 ka hatramin'ny 1,5-degre hanamorana ny fivoahana.
Ny fototry ny taolan-tehezana dia tokony hanana radius 0,25 ka hatramin'ny 0,4 heny ny hatevin'ny rindrin'ny anarana.
Ny halavirana eo anelanelan'ny taolan-tehezana roa dia tokony ho 2 hatramin'ny in-3 (na mihoatra) ny hatevin'ny rindrin'ny anarana.
8.Ny sisin'ny taratra
Rehefa mifanena ny sehatra roa dia mamorona zoro izany. Amin'ny zorony, ny hatevin'ny rindrina dia mitombo hatramin'ny 1,4 heny ny hatevin'ny rindrina anarana. Izany dia miteraka fihenan'ny fahasamihafana sy ny adin-tsaina mihombo ary ny fotoana hatsiaka lava kokoa. Noho izany, ny risika tsy fahombiazan'ny serivisy dia mitombo amin'ny zoro maranitra.
Mba hamahana an'io olana io dia tokony hohosorana amin'ny radius ny zorony. Ny radio dia tokony omena ivelany sy anatiny. Aza manana zoro maranitra ao anatiny satria mampirongatra ny triatra. Ny taratra dia tokony ho toy izany manamafy ny fitsipika hatevin'ny rindrina tsy tapaka. Aleo ny manana tadin'ny 0,6 hatramin'ny 0,75 heny ny hatevin'ny rindrina eo amin'ny zorony. Aza manana zoro maranitra ao anatiny satria mampirongatra ny triatra.
Mampiasa visy foana izahay mba hametahana tranga roa amin'ny antsasany, na hamehezana PCBA na singa hafa amin'ireo faritra plastika. Ka ny lehiben'ny visy dia ny firafitry ny fikorisana sy ny ampahany raikitra.
Ny lehiben'ny visy dia miendrika varingarina. Ny sefo dia mety ampifandraisina amin'ny fototra miaraka amin'ny ampahany amin'ny reny na mety ampifandraisina amin'ny sisiny. Ny fampifandraisana eo an-daniny dia mety miteraka faritra matevina amin'ny plastika, izay tsy irina satria mety hiteraka marika milentika sy hampitombo ny fotoana mangatsiaka. Ity olana ity dia azo hamahana amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny sefo amin'ny alàlan'ny taolan-tehezana eo amin'ny rindrin'ny lafiny toy ny aseho amin'ny sary. Ny bosoa dia azo atao henjana amin'ny fanomezana taolan-tehezana.
Screw dia ampiasaina amin'ny boss mba hanamafisana ampahany hafa. Misy kofehy mamorona karazana visy ary karazana visy. Ny visy famolavolana kofehy dia ampiasaina amin'ny thermoplastics ary ny visy fanapahana kofehy dia ampiasaina amin'ny faritra plastika thermoset tsy voafehy.
Ny visy fanamboarana kofehy dia miteraka kofehin-vehivavy amin'ny rindrin'ny atin'ny lehiben'ny famafana mangatsiaka - simika eo an-toerana ny plastika fa tsy tapaka.
Ny mavesatra Screw dia tsy maintsy refesina mifanaraka amin'ny herin'ny fampidirana visy sy ny enta-mavesatra apetraka amin'ny visy amin'ny serivisy.
Ny haben'ny borosy mifandraika amin'ny visy dia zava-dehibe amin'ny fanoherana ny famongorana kofehy sy ny fihoaram-bidy.
Ny savaivony ivelany an'ny boss dia tokony ho ampy haharitra amin'ny fihenjanana noho ny famolavolana kofehy.
Bore dia manana savaivony somary lehibe kokoa amin'ny fialan-tsasatra fidirana mandritra ny halavany fohy. Manampy amin'ny fitadiavana visy alohan'ny hitondrana azy io. Izy io koa dia mampihena ny adin-tsaina amin'ny faran'ny lohan'ny sefo.
Ny mpanamboatra polymer dia manome torolàlana amin'ny famaritana ny refy an'ny boss amin'ny fitaovany. Manamboatra torolàlana momba ny habeny mety amin'ny biriky ihany koa ireo mpanamboatra visy.
Ny fitandremana dia tokony horaisina mba hiantohana ireo tonon-taolana mahery manodidina ny visy volo ao amin'ny sefo.
Tokony hotandremana mba hisorohana ny adin-tsaina mihoapampana ao amin'ny boss satria mety tsy hahomby izy io eo ambanin'ny tontolo mahery setra.
Ny ateraky ny sefo dia tokony ho lalina kokoa noho ny halalin'ny kofehy.
Indraindray, raha te hanana endrika bika isika, dia matetika isika no manao fitsaboana manokana eo ambonin'ny tampon'ny plastika.
Toy ny: firafitra, glossy avo lenta, sary hoso-doko, sary sokitra amin'ny laser, fametahana hafanana, fametahana herinaratra sns. Ilaina ny mandray an-tsaina ny famolavolana ny vokatra mialoha, mba hialana amin'ny fanodinana manaraka dia tsy ho tratra na ny fiovana habe misy fiantraikany amin'ny fivorian'ny vokatra.
Previous: Fanaovana bobongolo
Manaraka: Lasitra fanariana maty
Famokarana Prototype plastika
Prototype plastika Prototype
Famolavolana tsindrona plastika prototype
Famolavolana plastika prototype